Firefox 82 waxay la timid horumarin loogu talagalay fiidiyowga, dardargelinta iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Nooca cusub ee Firefox 82 horey ayaa loo sii daayay waana la heli karaa si loo soo dejiyo, marka lagu daro cusbooneysiinta nooca oo leh taageero waqti dheer ah 78.4.0.
Noocaan cusub ee biraawsarka la yimaado horumar kala duwan kuwaas oo aan ka heli karno in horumar la sameeyay si loo hagaajiyo kan waayo-aragnimo muuqaal fiidiyoow ah.
Tusaale ahaan, Muuqaalka Sawirka-Sawirka, goobta iyo qaabka badhannada xakamaynta waa la beddelay loo maqli karo si ay uga sii muuqdaan. Isticmaalayaasha macOS, toobiye kumbuyuutar (Xulasho + Talis + Shift + Xuquuqda Qeybta) waxaa la siiyaa si loo furo Sawirka daaqadda Sawirka, oo shaqeyneysa xitaa ka hor inta uusan fiidiyowgu bilaabin inuu ciyaaro. Windows wuxuu u adeegsadaa DirectComposition qalabaynta qalabka fiidiyowga si loo yareeyo isticmaalka processor-ka loona ballaariyo nolosha batteriga.
Dhammaan Windows 10 isticmaaleyaasha leh qalabka lagama maarmaanka ah, mashiinka ka kooban WebRender, kuna qoran miridhku, waa la kartiyeeyaa, oo u oggolaanaya in lagu gaaro koror weyn oo xawaaraha waxqabadka ah isla markaana la yareeyo culeyska saaran processor-ka sababtoo ah u fidinta hawlgallada bixinta bogga bogga ee GPU-da.
Wixii Linux ah, wadayaasha NVIDIA ku sii jira liiska xayiraadda WebRenderiyo sidoo kale wadayaasha Intel markay isticmaalayaan qaraarada shaashadda ee 3440 × 1440 iyo wixii ka sareeya.
On Android, mashiinka WebRender waa loo kartiyeeyaa qalabka leh Adreno GPUs 5xx (Google Pixel, Google Pixel 2 / XL, Oneplus 5), Adreno 6xx (Google Pixel 3, Google Pixel 4, Oneplus 6), iyo sidoo kale taleefannada casriga ah ee Pixel 2 iyo Pixel 3.
Isticmaalayaasha NVIDIA Darawallada Binary ee Linux waxay gacan ku siiyeen WebRender (gfx.webrender.all = run ku saabsan: config) hana u isticmaalin halabuurka dib u noqon kara, halka qeybta kore ee shaashadda ay ka noqoto leydi la buuxiyay.
Arrintan waxaa lagu xallin karaa iyadoo la awood siinayo isku-darka ama loo dhoofiyo mid ka mid ah kuwa deegaanka ka mid ah:
Shaqada ayaa la qabtay si loo dardar geliyo rarka bogga loona yareeyo waqtiga bilowga biraawsar.
Lagu daray karti u lahaanshaha daawashada maqaallada cusub markii aad bog ku keydinaysid adeegga Jeebka Iyada oo loo marayo badhan ku yaal guddiga: Wadahadal pop-up ah ayaa hadda soo bandhigaya xulasho maqaallo ah oo laga soo qaaday goobta lagu daray oo ay doorteen isticmaaleyaasha kale ee jeebka ku jira.
Dejinta dejinta ee ka dhexeysa aaladaha ayaa la ballaariyay. Tusaale ahaan, iswaafajinta xulashooyinka wareejinta ayaa lagu daray, iyo sidoo kale goobaha kumbuyuutarka shaashadda iyo qaabka sawirka-sawirka.
Telemetry-ka laga soo ururiyey Linux, ah xisaabinta macluumaadka ku saabsan borotokoolka nidaamka 'windows' (Wayland, Wayland / DRM, XWayland ama X11).
Kal-fadhiga Warbaahinta ee API waa mid awood u leh asal ahaan, kaas oo bixiya qalab lagu habeeyo baloog leh macluumaad ku saabsan dib u soo celinta qalabka maaddooyinka badan ee aagga ogeysiinta. Iyada oo loo marayo API-kan, codsi websaydh ah ayaa u habeyn kara muuqaalka macluumaadka aagga ogeysiinta, tusaale ahaan, badhamada meel dhig si aad u hakiso, ugu gudubto isku xigxiga ama aado halabuurka xiga.
Intaa waxaa sii dheer, adigoo adeegsanaya 'Media Session API', waxaad ku dari kartaa kuwa gacanta ku haya badhannada warbaahinta ee ka hawl gala aagga ogeysiinta ama marka shaashadda keydka ay shaqeyneyso.
Marka lagu daro hal-abuurnimada iyo cilladaha cayayaanka, Firefox 82 waxay hagaajisay 15 nuglaansho, oo 12 kamid ah loo calaamadeeyay inay khatar yihiin. 10 u nuglaanta (oo loo soo ururiyey CVE-2020-15683 iyo CVE-2020-15684) waxaa sababa arrimaha xusuusta sida qulqulka buundooyinka iyo helitaanka meelaha xusuusta ee horay loo sii daayay.
Dhibaatooyinkani waxay horseedi karaan fulinta koodh xaasidnimo ah marka la furayo bogag si gaar ah loo farsameeyay.
Sidee loo rakibaa nooca cusub ee Firefox 82 ee Linux?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox 82 waxay la timid horumarin loogu talagalay fiidiyowga, dardargelinta iyo inbadan